Dapoxetine hcl （129938-20-1 factory ụlọ ọrụ na-ebubata ngwa ahịa
Dapoxetine hydrochloride bụ ọgwụ serotonin reuptake inhibitor ọgwụ nke emepụtara maka ọgwụgwọ nke ejaculation akaghi aka. ọtụtụ ọmụmụ egosiwo na ndị na-emechi serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) na ọgwụ ndị nwere mmetụta mmetụta SSRI dị mma ma dị irè iji mesoo ọnọdụ a, ọtụtụ ndị dọkịta na-ejikwa ndị ọrụ a maka ebumnuche a. Usoro ọgwụgwọ na-agwụ ike na-agwọ ọrịa na ndị na-ahụ maka ọgwụ na-agwọ ọrịa na mpaghara nwere ike ịba uru nye ụfọdụ ụmụ nwoke na-ejikarị ejaculation. Ọ bụrụ na onye ọrịa nwere nsogbu erectile metụtara ịda mbà n'obi mana ọ bụghị ngwa ngwa, enwere ike ịtụle ọgwụ nwere obere mmetụta mmekọahụ iji zere ime ka ejaculation na-egbu oge ma ọ bụ ọbụna anorgasmia.
Ozi Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ
aha Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ
molekụla arọ 258.62 g / mol
1.Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ Nkọwa Izugbe?
Dapoxetine raw bụ ọgwụ nhọrọ serotonin reuptake inhibitor nke mepụtara n'ụzọ pụrụ iche maka ịgwọ ọrịa ejikọtaghi yari. Ọ na - abawanye oge ọ na - ewe ọsịsọ ma nwee ike melite njikwa mmachi ahụ. Ọ na-amalite ịrụ ọrụ ngwa ngwa, yabụ, a na-ewere ya mgbe ị na-atụ anya inwe mmekọahụ, karịa ụbọchị niile. Ikwesiri iwe ya awa 1-3 tupu inwe mmekọahụ.
Dapoxetine ntụ ntụ bụ ihe nchekwa dị mma ma na-arụkwa ọrụ maka ịmịpụtara ụkọ (PE), mana o nwere oke nkwụsị, dịka nyocha ọhụrụ si dị.
Dapoxetine, bụ nhọrọ serotonin reuptake inhibitor (SSRI), bụ naanị ọgwụ ọnụ a zụlitere iji gwọọ PE. Anabatara na mba iri isii. Enwere ike ịgwọ PE site na ọgwụgwọ mmekọahụ, ọgwụ, ma ọ bụ ngwakọta nke ụzọ ndị a. International Society for mmekọahụ nwoke na nwanyị (ISSM) na-ekewa PE n'ụzọ abụọ. Ngosiputa nkpuru ndu ahu bu nkpuru ogwu na - aputa ma obu tupu n’ime nkeji na - abia n’ime ya, malite na nmekorita nwoke na nwoke mbu. Withmụ nwoke enwetarala PE ejaculate n'ime ihe dị ka nkeji atọ ma na-enwe ezumike nkịtị n'otu oge.
Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ ntụ
Gwọ ahụ ga-adị iche maka ndị ọrịa dị iche iche. Biko biko soro iwu dọkịta gị ma ọ bụ nyochaa ntụle abụọ dị na akara ahụ tupu ị were ọgwụ a. Ihe omuma ndi a gụnyere nani onunu ogwu a. Ọ bụrụ na ọgwụ gị dị iche, Biko agbanweela ọgwụ ahụ na-enweghị ịgwa dọkịta gị, Agbanwela ọgwụ ahụ belụsọ ma dọkịta gị agwa gị ka ị mee ya.
Akwadoro maka ndị ọrịa niile na ụmụ nwoke tozuru etozu (18 ruo 64 afọ) kwesịrị iji otu ntụ ntụ Dapoxetine otu na elekere atọ tupu ha enwee mmekọahụ.
Startingdị mmalite nke Dapoxetine ntụ ntụ bụ 30mg. Ọ bụrụ na nke a adịghị arụ ọrụ nke ọma na dọkịta gị nwere ike ime ka ọgwụ gị dịkwuo 60mg, mana nke a ga-eme ma ọ bụrụ na ịnwebeghị mmetụta ọ bụla na obere ọgwụ.
Can nwere ike were mbadamba nri ma ọ bụ na-enweghị nri. Ghaa ya dum (egbula ma ọ bụ kpochapụ ya iji zere inwe ilu ilu) na iko mmiri zuru ezu iji belata ihe egwu nke inwe nhụjuanya.
Maka afọ 65 na karịa, A nyochaghị ngwa ahịa a na afọ 65 na nchekwa na arụmọrụ dị na ndị ọrịa karịrị igwe mmadụ ejiri, ihe bụ isi maka data maka ngwaahịa a maka iji eme ihe na oke ndị ọrịa nwere oke mmerụ ahụ. ma ọ bụ ndị ọrịa nwere mmerụ akụrụ adịghị mkpa ịhazigharị ọnya mgbe ị na-ewere ngwaahịa a, mana kwesiri iji ya kpachara anya. A naghị akwado ngwaahịa a maka ndị ọrịa nwere nnukwu akụrụ.
Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ mmetụta,
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ mmetụta ndị nwere ike jikọta na Dapoxetine Hydrochloride. Ọgwụ na mmetụta ha nwere ike imetụta ndị mmadụ n'otu n'otu n'ụzọ dị iche iche.
Ọrịa mmetụta Dapoxetine Hydrochloride bụ nke a na-ahụkarị (na-emetụta ihe karịrị 1 n'ime mmadụ 10)
Dizziness.Headache.Ọ na-arịa ọrịa.
Ọrịa mmetụta Dapoxetine Hydrochloride na-emetụta (na-emetụta otu onye n'ime 1 na 10 na 1 mmadụ)
Inwe obi erughi ala, iwe iwe, enweghi ike iru uju ma obu nkpasu iwe.
Ihe nlebara anya isi ike.
Ike gwụrụ ma ọ bụ ihi ụra. Akwọkwala ma ọ bụ rụọ igwe ma ọ bụrụ na emetụtara gị.
Ahịrị na agịga ma ọ bụ ụda na-akụda mmụọ. Mkpọtụ ma ọ bụ mkpọtụ ndị ọzọ na ntị (tinnitus).
Ọsụsọ na-agba oke.
Ighalo ura .Ndighi urahuhu.
Inwe mmekọahụ na-ebelata.
Nsogbu inweta okpo (erectile dysfunction).
Ihe ọghọm maka gut dị ka afọ ọsịsa, ọgbụgbọ, afọ ntachi, afọ mgbu na ahụ erughị ala, afọ mgbu, ọnya na nkụ.
Dapoxetine ntụ ntụ na-adịghị ahụkebe (mmetụta dị n'etiti 1 na 100 na 1 na mmadụ 1000)
Iriju ma ọ bụ itufu mgbe ị na-ebili dina ala ma ọ bụ ịnọdụ ala. Belata ihe egwu dị na nke a site n'ịhụ na ị drinkụrụ iko mmiri zuru oke mgbe ị na-ewere mbadamba gị, yana site na iji nwayọ nwayọ ma ọ bụrụ na ịnọdụ ọdụ ma ọ bụ dinaa ogologo oge. Ọ bụrụ n ’ịdọ aka na ntị ị nwere ike ịda mba, dịka ịda mba n’obi, isi gị ala, ma ọ bụ daa ọrịa ma ọ bụ ọsụsọ, dina ma ọ bụ dinaa isi gị n’agbata ụkwụ gị ruo mgbe mgbaàmà ahụ gafere.
-Mgbe zụta Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ na nnukwu?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Dapoxetine raw ntụ ntụ, Biko nyere aka ịkpọtụrụ anyị, Anyị bụ Dapoxetine hydrochloridel powder supplier ruo ọtụtụ afọ, Anyị na-enye ngwaahịa na asọmpi ọnụahịa, ezigbo ndị ahịa na ọrụ ngwaahịa.
Anyị na-agbanwe na nhazi nke iwu iji dabaa mkpa gị yana oge ọsọ ọsọ anyị na iwu na-ekwenye na ị ga-anụ ụtọ ọrụ anyị. Anyị dịkwa maka ajụjụ ọrụ na ozi iji kwado azụmahịa gị.
Dapoxetine hydrochloride ntụ ntụ
McMahon, CG (Ọkt 2012). "Dapoxetine: nhọrọ ohuru na njikwa ahụike nke ejaculation akaghi aka". Ọgwụ Ọgwụ na Urology. 4 (5): 233–51. ma ọ bụ: 10.1177 / 1756287212453866. PMC 3441133. PMID 23024705.
Ọchịchị, A. (2010). Nkwupụta Nyocha Ọha nke Australia maka Dapoxetine (D. o. H. a. Nchịkwa ATG, Trans.).
Andersson, KE; Mulhall, JP & Wyllie, MG (2006). "Pharmacokinetic na pharmacodynamic atụmatụ nke dapoxetine, akwụkwọ akụkọ ọgwụ maka 'na-ina' ọgwụgwọ nke akaghi aka ejaculation". BJU International. 97 (2): 311–315. ma ọ bụ: 10.1111 / J.1464-410x.2006.05911.X. PMID 16430636.
McCarty, E. & Dinsmore, W. (2012). "Dapoxetine: nyocha nke na-egosi na ọ dị irè na ọgwụgwọ nke ejaculation akaghi aka". Isi Ihe. 7: 1–14. ma ọ bụ: 10.2147 / CE.S13841. PMC 3273363. PMID 22315582.
"Furiex Pharma na-enweta ikike Priligy, ụfọdụ n'ime ya na-eresị ndị Menarini". Akwụkwọ Ozi Pharma. 15 Mee 2012. Weghachite 11 February 2020.